Medicare loQingqo Medigap by 1-800-MEDIGAP e Indiana | Incline
Share Medicare loQingqo Medigap by 1-800-MEDIGAP e Indiana
Medicare loQingqo Medigap by 1-800-MEDIGAP e Indiana
Medicare Izicwangciso yakwa e Indiana
Xa dicare kubagubungela 80% esibhedlele kunye nogqirha eshiya-20% ukuba ahlawule. Unayo iindlela ezimbalwa yokuhlawulela-20%. unako ukuhlawula ephuma epokothweni yakho, okanye ungafumana nto kuthiwa isicwangciso Medigap wayekwabizwa ngokuba isicwangciso ukuncedisana dicare.
Yintoni isicwangciso yakwa dicare?
Isicwangciso Medicare yakwa (Medigap) e Indiana yenzelwe yokugubungela ezinye iindleko out-of-epokothweni enxulumene Original dicare (Inxalenye A neCandelo B), njengoko kunjalo kwamanye amazwe. Ezi ndleko ukuze kuquka imali, coinsurance, copayments, kunye nezinye iindleko out-of-epokothweni ngokokuqhelekileyo kuhlawulwa kumxhamli. Eminye imigaqo Medigap ziquka unyango olungxamisekileyo xa sele bemke ezweni. izicwangciso yakwa Medicare zithengiswa ziinkampani zabucala inshorensi. Abaxhamli banoxanduva lokuhlawula sentlawulo ngenyanga kwi isicwangciso Medigap, kwakunye ipremiyamu for dicare Icandelo B. Ngowe-47 uthi, kuquka Indiana, kukho 10 izicwangciso ezisemgangathweni Medigap ogama kunye izihlonipho leta, ezifana nezicwangciso yakwa Medigap Plan L. dicare kwe leta kunika iinzuzo ezifanayo akukhathaliseki nokuba sesiphi na inkampani inshorensi yabucala uthenga le nkqubo ukusuka okanye uthenga apho. Umzekelo, Medigap Plan L evela kwinkampani yeinshorensi e Bloomington ukuba ugubungela out-of-epokothweni indleko dicare Icandelo A neCandelo B njenge Medigap Plan L in uGary, okanye Medigap isiCwangciso L kwimeko ezahlukeneyo. Kodwa iindleko isicwangciso kunye nokufumaneka badla buyahluka iinkampani inshorensi kunye neendawo.
Ngokubhalisa isicwangciso yakwa dicare e Indiana
Lixesha elihle ungena isicwangciso Medigap ingexesha Medigap wakho Open Yokubhalisa Ithuba (OEP), kwisithuba seenyanga ezintandathu eqala ngenyanga ukuba engama-65 ubudala kwaye dicare Icandelo B. Ukuba ubhalisela ngeli thuba, uza kuba "aqinisekiswe ilungelo umba" uvume kwisicwangciso; oko kukuthi, uya kuba phantsi echaza wena. Ukuba ungena phezulu ngexesha lakho Medigap OEP ukuze isicwangciso Medigap wathengisa kwingingqi yakho, inkampani yeinshorensi Medigap ezifundisa isicwangciso andingekhe ndikukhanyele ingxelo nokuba unayo iingxaki zempilo. Inkampani kwakhona akanakuhlawulisa ngezavenge ngaphezu kwakuya kumniniwo usempilweni entle. Xa sele ubhalisile isicwangciso Medigap, kufikelelo uyaqinisekiswa ehlaziyekayo ngonyaka ngamnye ngaphandle uyasilela ukuhlawula intlawulo yakho yenyanga, u nga banyaniseke kwisicelo okanye inkampani yeinshorensi Medigap uba yokuziphatha okanye amatyala.
Ukukhetha Medicare isicwangciso yakwa e Indiana
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, inkoliso States zinika iindidi 10 ezahlukeneyo izicwangciso yakwa dicare. Ungafuna ukucinga ukuba kukangaphi apho kufuneka iyokubona ugqirha kunye nezinye iinkonzo ezempilo, kwaye khetha isicwangciso Medigap ngokufanelekileyo; isicwangciso ngamnye unobumba abe kwinqanaba ezahlukeneyo ingxelo.
Thoba .Media lilawulwa kwaye iqhutywa ngokuzimeleyo abasebenzisi bethu, make akukho bango ukuba zinokwenzeka na. Xa kuziwa dicare izongezelelo sicebisa ukuba uqhagamshelane dicare arhente inshorensi efakelwayo mvume kwindawo yakho okanye ukubiza abahlobo bethu 1-800- MEDIGAP .
Le Website ukhonza isimemo kuni, uMthengi, ukuba abuze malunga ingcaciso engaphezulu malunga dicare yakwa okanye inshorensi Medicare , kunye nokungeniswa iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano eyenza imvume iarhente ukuba ukuqhagamshelana nawe ngolwazi ngakumbi, kuquka iinkcukacha ngokupheleleyo iindleko nobandakanywe le inshorensi ukuba ufuna.
Uninzi abathengi bethu kolu didi zingabameli ilayisenisi ukuba ndikubize kwaye awudutyaniswanga okanye ivunywe yi-Government US okanye inkqubo dicare Federal. Medicare ingakwazi ngokutsha okanye uxhase ulwazi oluqulethwe kule website. Lo udweliso epheleleyo lwezicwangciso ezikhoyo kwingingqi wesevisi wakho. Kuba uluhlu olupheleleyo nceda uqhagamshelane 1-800-dicare okanye udibane www.medicare.gov (abasebenzisi TTY kufuneka kubiza 1-877-486-2048), iiyure ezingama-24 ngosuku / 7 iintsuku ngeveki okanye udibane www. href = "http://www.medicare.gov"> medicare.gov.
<h4><a href='http://incline.media/Medicare-Supplements/Medicare-loQingqo-Medigap-by-1-800-MEDIGAP-e-Indiana/503'>Medicare loQingqo Medigap by 1-800-MEDIGAP e Indiana</a></h4><iframe class='mediaserv_video' src='//embed.mediaserv.solutions/?storagenode=3&filename=tSJenyLm09HpO8DNfCJewfKo0zfbMaIitcJjrw74kxBsaD64mxsmIVHFArP6SuyLumbeRJlNY1oJojKlvfroImMtjWSNDIeeK6LDvVlE0VRvhRmcXuYu1Dzn8DzQteN8gWjG0kDE6FelKTeFhFExyW.mp4&logo=http://incline.media/template/img/default-avatar.png&logo_href=http://incline.media/Medicare-Supplements' frameborder='0' allowfullscreen='true'></iframe><br /><span style='font-size: 10px;'>By <a href='http://incline.media/Medicare-Supplements'>Medicare Supplements</a> on <a href='http://incline.media'>Incline</a></span>